Nin Aabbe ma noqdo !!
Sunday August 23, 2015 - 09:28:13 in Maqaallo by Super Admin
Akhirstoow, ma la yaabtay cinwaanka qormadayda? Malaha way isu kaa diidday oo waad is qabadsiin wayday weedhan oranaysa "Nin Aabbe ma noqdo". Oo haddaa ma Naag baa Aabbe noqota? Haa waa is waydiinta ay durbaba maskaxdaadu soo tufi karto. Wa
Akhirstoow, ma la yaabtay cinwaanka qormadayda? Malaha way isu kaa diidday oo waad is qabadsiin wayday weedhan oranaysa "Nin Aabbe ma noqdo". Oo haddaa ma Naag baa Aabbe noqota? Haa waa is waydiinta ay durbaba maskaxdaadu soo tufi karto. Waa sax,anigaa ku idhi waa sax, Nin Aabbe ma noqdo! Haddaa yaa noqda Aabbe? Anigaa kuu sheegi doona ee bal aan in yar qormadan horay usii galno.
Raganimadu waxa ay ninka dhaxashiisaa Ubad uu isagu dhalay, laakiin awooddaasi kaligeed kuma filna in uu ninku Aabbe noqdo. Haddaa ma nin wax dhalay oo aan Aabbe ahayn baa jira? Haa. Ninnimo Aabbe laguma noqdo, Aabbenimase nin waa lagu noqdaa!! Waxaan kaloo anigu aaminsan ahay in Aabbe la noqon karo iyada oo aan Ilma la dhalin! Oo sidee ah?Haa, Aabbuhu ma aha kan ilma dhala uun!!
Wali ma dhacday, mase dhici kartaa hadda in aad Ilmahaaga Saxarada ka dhaqdo? Su’aashan waxa aan kuu waydiinayaa in ay rag badan aaminsan yihiin in saxara ka dhaqidda caruurta ay tahay howl u gaar ah Hooyada.
Wali ma dhacday, mase dhici kartaa hadda in Haweeneyadaada oo seexatay aad Habeen barkii soo kacdo si aad u hubsato in Cunugaaga yar ee sariirta saaran uu nabad qab ku hurdayo? Ilmaha dharabta ku jirta waxaa badan in ay si lama filaan ah isugu geddiyaan oo wajiga iska saaraan Dhar ama wax kasta oo halka ay jiifaan ka dhaw. Waa suurtagal in uu cunugga naqaska ku dhego. Adiga Aabbe ilmihiisa jecel marka aad tahay, hurdadu kaamasoo dhacayso mar allaale oo aad soo xusiisato halista ilmahaagan yar soo food saari karta. Markaa waad ku qasban tahay in aad laxawsi iyo jacayl dartiis usoo toosto oo aad hubiso in uu cunugaagii yaraa kuu nabad qabo. Intaas aan kuu sheegayo qaar baan samayn oo habeenkii iska hurda. Kuwaasi waa Niman. Mase aha Aabbeyaal!!
Wali ma dhacday, mase dhici kartaa hadda in Cunugaaga oo aan socod gaarin aad lacag tira badan ugusoo iibisay Kabo, sidoo kalena usoo iibisay qalab uu ku ciyaaro adiga oo ku fekeraya in aanay Ilmahaagu ka farxad yaraan caruurta kale. Haddaa ogaaw ilmahaagu wali waa ay yar yihiin oo farxad iyo murug xilligeediiba ma aysan gaarin. Sidaas oo ay tahay, niyadda kugu jirtaa waa ay kaa diidday in iyada oo nin caruur dhalay oo qayrkaa ahi lacag badan ku bixinayo farxadda ilmihiisa aad adiguna taada bakhaylato. Waad baxday oo waxaad soo iibisay intii uu kan kula mid ahi ilmihiisa usoo iibiyay, qalbigaaguna wuu xasilay markii aad hubsatay in cunugaaga aan socodka wali gaarin uu heysto Kobaha ay haystaan Ilmaha kale ee cararaya. Waxa ay naftaadu kugu tidhi (Cunugaaga oo farxad uusan garanayn sariirta la jiifa ayaa ka roon adiga oo farxad u heli waayay). Marka ay garashadaadu intaa ku haleeshiisay oo aad sidaasi samaysay, ogaaw rag baa jira ku doodaya (Ilmo sariir jiifa maxay farxadka garanayaan?). Kuwaasi waa Niman. Mase aha Aabbeyaal!!